Guddoonka Baarlamaanka oo shaaciyay maalinta uu furmayo Kalfadhiga 6-aad ee Baarlamaanka – Kalfadhi
Guddoonka Baarlamaanka oo shaaciyay maalinta uu furmayo Kalfadhiga 6-aad ee Baarlamaanka
C/kariim Xaaji Cabdi Buux, ayaa sidoo kale sheegay in 9-ka bisha uu sidoo kale furmi doono kullamadda Aqalka sare ee Baarlamaanka.
Kalfadhiga 6-aad ee golaha shacabka ee Baarlamaanka dowladda Federaalka ee Soomaaliya, oo lagu waday in uu furmo 27-kii bishii Sept, ayaa dib-u-dhac uu ku yimid. Xeer-hoosaadka Baarlamaanka ayaa dhigayaa in mudanayaasha Baarlamaanka ay leeyihiin afar-bilood oo shaqa ah iyo laba-bilood oo fasaxa ah.
Sidoo kale dalka ayaa isku diyaarinayay in uu marti geliyo shirkii iskaashiga beesha Caalamka iyo dowladda Soomaaliya kaas oo todobaadkii hore lagu soo gaba-gabeeyay magaalada Muqdishu.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo waajibkiisa dastuuriga ah ay tahay in uu furo kalfadhiyada Baarlamaanka, ayaa ku maqnaa ka qeyb-galka fadhiga 74aad ee Shirweynaha Qaramada Midoobay.
Afhayeenka Madasha Xisbiyadda Dalka oo sheegay in Baarlamaanka uu u dhigmo Baarlamaankii dowladdii Kacaanka
Xildhibaan Dhalxa “Dowladda Federaalka haka fiirsato dadka ay u direyso wada-haddalada Somalia iyo Somaliland”
Xildhibaan Dhalxa “Dowladda Federaalka haka fiirsato dadka ay u direyso wada-haddalada Somalia iyo Somaliland"